Semalt: कसरी साइटहरू स्क्र्याप गर्ने? - शीर्ष सुझावहरू
स्क्र्यापिंग मार्केटिंग टेक्निक हो जुन वेब प्रयोगकर्ताहरूले वेबसाइटबाट ठूलो मात्रामा डाटा निकाल्न प्रयोग गर्दछन्। वेब फसलका रूपमा धेरैलाई ज्ञात छ, वेब स्क्र्यापिंगमा व्यक्तिगत पृष्ठहरू वा सम्पूर्ण साइटबाट डाटा र सामग्री डाउनलोड गर्नु समावेश छ। यो प्रविधी ब्लगरहरू, वेबसाइट मालिकहरू, र मार्केटिंग परामर्शदाताहरू द्वारा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसले मानव-पठनीय प्रोटोकलहरूमा सामग्री सिर्जना गर्न र बचत गर्न सक्छ।
प्रतिलिपि टाँसने सामग्री
धेरै जसो केसहरूमा वेबसाइटहरूबाट प्राप्त गरिएको डाटा मुख्यतया छविहरू वा HTML प्रोटोकलको रूपमा हुन्छ। वेबसाइट पृष्ठहरू म्यानुअल रूपमा डाउनलोड गर्नु भनेको स्क्र्यापर साइटबाट छविहरू र पाठहरू बाहिर निकाल्नको लागि सामान्यतया प्रयोग विधि हो। वेबमास्टर्स कमान्ड प्रॉम्प्ट प्रयोग गरेर स्क्र्याप साइटबाट पृष्ठहरू बचत गर्नको लागि कमान्डिंग ब्राउजरहरूमा प्राथमिकता दिन्छन्। तपाइँ तपाइँको पाठ सम्पादकमा प्रतिलिपि-टाँसेको सामग्री द्वारा वेबसाइटबाट डेटा निकाल्न सक्नुहुन्छ।
वेब स्क्र्यापि program प्रोग्राम प्रयोग गर्दै
यदि तपाइँ कुनै साइटबाट डाटाको ठूलो मात्रा तान्न काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, वेब स्क्र्यापि software सफ्टवेयरलाई शट दिने विचार गर्नुहोस्। वेब स्क्र्यापि software सफ्टवेयरले वेबसाइटहरूबाट डाटाको ठूलो मात्रा डाउनलोड गरेर काम गर्दछ। सफ्टवेयरले ढाँचा र प्रोटोकलमा निकालेको डेटा बचत गर्दछ जुन तपाइँको सम्भावित आगन्तुकहरू सजिलैसँग पढ्न सकिन्छ।
नियमित अंतरालमा साइटहरूबाट डाटा निकाल्न काम गरिरहेका वेबमास्टरहरूको लागि, बोटहरू र माकुरो प्रयोग गर्न उत्तम उपकरणहरू हुन्। बट्सले स्क्र्याप साइटबाट डाटा कुशलतापूर्वक निकाले र डाटाशीटमा सूचना बचत गर्दछ।
किन स्क्र्याप डाटा?
वेब स्क्र्यापि विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको एक प्रविधि हो। डिजिटल मार्केटिंगमा, तपाईका अन्त प्रयोगकर्ताहरू संलग्नता बढाउनु एकदम महत्वको छ। प्रयोगकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक बैठकको लागि, ब्लगरहरूले उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूलाई अपडेट राख्न स्क्र्याप साइटहरूबाट डाटा स्क्र्यापिंग गर्न जोर दिन्छन्। यहाँ साधारण उद्देश्यहरू छन् जुन वेब स्क्र्यापिंगमा योगदान गर्दछ।
अफलाईन उद्देश्यका लागि डाटा स्क्र्याप गर्दै
केही वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूले पछि हेर्नको लागि उनीहरूको कम्प्युटरमा डाटा डाउनलोड गर्छन्। यस तरिकाले, वेबमास्टरहरूले छिटो विश्लेषण गर्न र इन्टरनेट जडित बिना नै झिकिएको डेटा बचत गर्न सक्दछन्।
टुटेका लिंकहरूको परीक्षण गर्दै
वेब विकासकर्ताको रूपमा तपाईले आफ्नो वेबसाइट भित्र इम्बेडेड लिंक र छविहरूको जाँच गर्नुपर्नेछ। यस कारणका लागि, वेब विकासकर्ताहरूले छविहरू, सामग्री, र उनीहरूको साइटको पृष्ठहरूमा लिंकको लागि परीक्षण गर्न वेबसाइटहरूको स्क्र्यापिंग कार्यान्वयन गर्दछ। यस तरिकाले, विकासकर्ताहरूले छिटो छविहरू थप्न सक्दछन् र तिनीहरूको वेबसाइटहरूमा भाँचिएका लिंकहरू पुन: विकास गर्न सक्दछन्।
सामग्री पुन: प्रकाशित गर्दै
गुगलसँग पुन: प्रकाशित सामग्री पहिचान गर्ने विधि छ। तपाईंको साइटमा प्रकाशित गर्नको लागि स्क्र्यापिंग वेबसाइटबाट प्रतिलिपि गर्ने सामग्री सामग्री गैरकानूनी हो र तपाईंको वेबसाईट बन्द हुन सक्छ। बिभिन्न ब्रान्ड नाम अन्तर्गत सामग्रीको पुन: प्रकाशन सर्तहरू कसरी संचालन गर्दछ भन्ने नियम र दिशानिर्देशहरूको उल्ल as्घनको रूपमा देखिन्छ।
सर्तहरूको उल्ल blog्घनले ब्लगरहरू, वेबमास्टरहरू र मार्केटरहरूको अभियोगमा निम्त्याउन सक्छ। साइटबाट सामग्री र छविहरू डाउनलोड गर्न र बाहिर निकाल्नु अघि, कानूनी रूपमा दंड र मुद्दा चलाउनबाट जोगिन साइटका सर्तहरू पढ्न र बुझ्नु राम्रो हुन्छ।
वेब स्क्र्यापि or वा वेब कटाई एक मार्केटिहरूले स्क्र्याप साइटबाट डाटाको ठूलो मात्रा निकाल्न व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने एक प्रविधि हो। स्क्र्यापिंगले सम्पूर्ण साइट वा विशिष्ट वेब पृष्ठहरू डाउनलोड गर्न समावेश गर्दछ। आजकल, वेब स्क्र्यापिंग उनीहरूको साइटहरूमा टुटेका लिंकहरू परीक्षण गर्न वेब विकासकर्ताहरू द्वारा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।